भोलि नयाँ बर्ष २०७९ बैसाख १ गते : तपाईको नयाँ बर्षको पहिलो दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल – Annapurna Post News
April 13, 2022 sujaLeaveaComment on भोलि नयाँ बर्ष २०७९ बैसाख १ गते : तपाईको नयाँ बर्षको पहिलो दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
ग्रहहरूको राजा सूर्यले बैसाख १ गते नयाँ बर्षका बिहीबारका दिन राशि परिवर्तन गर्दैछ । यस दिन सूर्यले बिहान ८:५६ बजे मेष राशिमा गोचर गर्नेछ। सूर्यको यो भ्रमण धेरै राशिका मानिसका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने ज्योतिषीहरुले बताएका छन् । सूर्यको यो गोचर मेष, वृष र मीन राशिका लागि कष्टदायी रहनेछ। तसर्थ, यी राशिका व्यक्तिहरूलाई सावधान रहन सल्लाह दिइन्छ।